Nnwom 53 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica América Latina
Nnwom 53 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Nkwaseafo ka wɔ wɔn koma mu se, “Onyankopɔn bi nni baabi.” Wɔn nyinaa yɛ amumɔyɛfo a wɔayɛ bɔne akɛseakɛse a wɔn mu baako koraa nni hɔ a ɔyɛ ade pa.
2 Onyankopɔn hwɛ nnipa mma wɔ fam fi soro hwɛ sɛ obehu anyansafo bi wɔ wɔn mu a wɔbɛsom no. 3 Nanso wɔn nyinaa atwa wɔn ani; wɔn nyinaa yɛ bɔne pɛ. Wɔn mu baako po nyɛ ade trenee; ɔbaako mpo nni hɔ. 4 Onyankopɔn bisa se, “Wonnim anaa? Saa nnebɔneyɛfo yi nnim anaa? Wɔbɔ me nkurɔfo korɔn de tena ase nanso wɔmmɔ me mpae.” 5 Nanso ahopopo bi a ebi nkaa wɔn da bɛka wɔn. Onyankopɔn bɛbɔ ne nkurɔfo atamfo nnompe apansam. Onyankopɔn apo wɔn, na saa ara na Israel bedi wɔn so pasaa ne no. 6 Me mpae ne sɛ, nkonimdi befi Israel aba Sion. Sɛ Onyankopɔn ma ahotɔ ba Israel a, dɛn ahotɔ na wɔrennya?
NA-TWI : Nnwom 53